Ukudalwa Kwamaxhaphozi nokubuyiselwa kweMarsh - i-Ellicott Dredges
Ukuvuselelwa KweWetland neMarsh
I-Ellicott Dredges idizayina, ikhiqize futhi ihambise ama-dredges asindayo asindayo wamaphrojekthi wokubuyiselwa kwamaxhaphozi. Ama-dredges ethu e-Swinging Dragon® ajwayelekile afaka ama-8-inch (200 mm), 12-inch (300 mm), kanye namandla wokukhipha we-14-inch (350 mm), kulula ukuthutha futhi anikele ngobubanzi be-swing ububanzi ngokunemba kahle ngenkathi unikeza ikhebula Ukudonswa kwamahhala - azikho izintambo. Lawa ma-ladder swing swing asetshenziselwe izinhlobo ezahlukahlukene zamanzi amancane nezikhulu namaphrojekthi wokubuyiselwa kwemashi.
Amaxhaphozi yizindawo zomhlaba lapho amanzi emboza inhlabathi unyaka wonke ezindaweni ezinjengezixhaphozi, amachibi, imifula, amachibi, amachibi, kanye namachibi kasawoti. Ngaphezu kwalokho, amaxhaphozi aqukethe iningi lamanzi ahlanzekile eplanethi yethu futhi ayizindawo ezinhle zokudoba ezikhiqiza ukudla kwasolwandle okuvunwe ngokuhweba. Lezi zindawo zinganciphisa nezimo zezulu zomkhathi ngokugcina ikhabhoni emiphakathini yezitshalo nomhlabathi esikhundleni sokuyidedela emoyeni.
Ngokusho kweNational Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ngaphezu kwamahektare angama-80,000 amaxhaphozi asogwini alahleka ngonyaka ngenxa yokuguguleka kolwandle nokukhuphuka kwamazinga olwandle. Imisebenzi yabantu, ukufuduka emadolobheni kanye nokuqubuka kwesiphepho ngezinye zezinto ezinomthelela eziguqula izindawo zasogwini nezasolwandle ngokuhamba kwesikhathi. Inhlabathi edonswayo ebuyisiwe isetshenziselwa ukulwa nale nkinga ekhulayo ngokubuyisa izindawo ezinamaxhaphozi ezinomswakama, ukunciphisa ukuguguleka kogu, nokunciphisa umthelela wokuqubuka kwesiphepho eduze nezindawo ezisogwini.
Ukubaluleka Kokulondolozwa KwamaMarshes & Wetlands
Amaxhaphozi namachibi asebenza njengezindawo ezivundile zezilwane ezinkulu ezinjengezinhlanzi, izinyoni nezinye izinhlobo zasemanzini. Zibuye zivikele ogwini lweplanethi yethu, zivimbele izikhukhula, ukuguguleka kwenhlabathi, nokungena kwamanzi. Ukugeleza okungokwemvelo kwendle equkethe ukungcola okuyingozi nokuqhuma kwesiphepho ngezikhathi ezithile kunganciphisa iziteshi eziphakela amanzi angenasawoti emaxhaphozini nasemanzini. Ukudonswa kwalezi zindawo kuvumela amanzi ukuthi ahambele kuzo zonke lezi zindawo ezisemaphandleni aletha izakhamzimba futhi akhiphe imfucuza.
Umehluko Phakathi KwamaMarshes Namaxhaphozi
IMarshes yizindawo ezingamaxhaphozi ezihlala zigcwele amanzi. Bacebile ngezakhamzimba futhi basebenza njengendawo yokuzalanisa izinhlanzi ezinamagobolondo nama-crustaceans. IMarshes yakha emathafeni asezindaweni eziphansi eduze kogu lolwandle, imifula, noma imifudlana. Zikhipha izakhamzimba nokungcoliswa okuvela emanzini, ziphinde zinikeze isithiyo ngokomzimba ekukhuphukeni kwamazinga olwandle nokukhuphuka kwesiphepho. IMarshes ibuye ivikele izindawo ezisogwini ekugugulekeni, okusebenza njengomugqa wokugcina wokuzivikela kumagagasi futhi kunciphisa izikhukhula ngokumunca amanzi emvula.
Lapho amazinga olwandle ekhuphuka, udaka lungagxila emanzini, lubulale izitshalo ebezingavimbela ukuguguleka komhlaba ukuba kwenzeke. Ukudonsa kabusha kusiza ukuthuthukisa noma ukubuyisela ukuzulazula kwesiteshi. Intlenga edonswa esiteshini nayo ingasetshenziselwa ukukhuphula amaxhaphozi angomakhelwane ngezinhloso zokuvikela imvelo kanye nogu.
Izinzuzo nezingqinamba zokubuyiselwa kweMarsh neWetland
Amaphrojekthi wokubuyiselwa komhlaba afaka ukubuyisela ixhaphozi elimoshekile noma imashi esimweni sayo semvelo. Kunezinzuzo zokubuyisela ixhaphozi noma umsele, okubandakanya ukwenza ngcono ikhwalithi yamanzi kanye nokwandisa ubuningi bezilwane zasendle nokwehlukahlukana. I-Sediment ebiyelwe futhi isetshenziselwe izinhloso zokubuyiselwa komhlaba ihlinzeka ngokuqina kwezitshalo futhi iyakwazi ukumelana nokukhuphuka kwezinga lolwandle. Lapho indawo enamanzi noma umhlanga iphakanyiswa ngokufanele, ithuthukisa uhlaza, ivumela umoya-mpilo ukuba ufinyelele ezimpandeni zayo kanye notshani bomdabu bukhule ngokusebenzisa into ebiyelwe kungakapheli iminyaka embalwa ngemuva kokudilizwa kokudilizwa.
Ukubuyisela indawo eyixhaphozi noma ixhaphozi esimweni sayo semvelo kungaba yinkohliso impela. Uma indawo yokubuyisela ingenziwa kahle, utshani bomdabu kanye nezithombo ngeke zikhule. Futhi, uma izinto ezibunjiwe njengesihlabathi zingayifanele imvelo, ngeke zibambe, nezindawo ezingamaxhaphozi ezibuyisiwe zizoguguleka, nokwehliswa komhlabathi kungaphinde kwenzeke.